iintlanzi zondla i-pellet yokuthengisa yeyona nto ithengiswa kakhulu
Amandla:3kw + 0.4kw isigaba sesithathu
Umthamo:30~ 50kg / h
Ukuqaliswa koDidi lweeNtlanzi zoKondla ngePellet Mill
Ukutya kweentlanzi zihlala zineprotheyini enobutyebi, kodwa iprotein ekrwada kukutya kunzima ukuyicola ngenxa yentlanzi. Emva kokuba kusetyenzwe ngepellet yokutya okufunxwa kokutya kungalula ukukutyisa. Okunjalo ngohlobo lomatshini wokuntywila wentlanzi, uhlobo olomileyo lusebenzisa nentsimbi yealloy. Uhlobo lomdaka weentlanzi zokupheka iintlanzi zepetri ilungile- okanye iifama eziphakathi nendawo kunye neefishari zokutya, kulungiselelwa ukutya kwe shrimp, ukutya kweprown, ukutya okuloba ngentlanzi, ukuntywila kweentlanzi ezityayo kunye ne pellet zokutya kwezilwanyana.
Ukusebenza kweMigaqo yoDidi oluLuhlaza lokuTya iintlanzi ngePellet Mill
Ngaphantsi kwesenzo somlo wempikiswano yesentloko eyintloko kunye nokufa, Uxinzelelo olujikelezayo lwe-spin. Ubushushu obuphakathi kwe-roller kwaye bafa buvutha isitashi sezinto, Iprotheyini iyavaleka. Emva koko ukutya kweentlanzi kukhutshwa kwimingxunya yokufa. Iipellets zokutya kweentlanzi ziveliswa ngaphandle komkhupheli. Ukongeza, sinokukhetha ubude besondlo ngokulawula i-angle ye-kne yokusika.
Izibonelelo zoDidi oluLuhlaza lokuTya iintlanzi ngePellet Mill
1. Ezi ntlanzi zondla ngepellet zisetyenziswa ngokubanzi ekuveliseni iipellets zokutya okuhamba ezintabeni zazo zonke iintlobo zezilwanyana zasemanzini.
2. Itekhnoloji ethe xhaxhe kunye noyilo lomntu luqinisekisa ukusebenza ngokulula kunye nokusebenza okuqinisekileyo.
3. le ntlanzi itya ukutya okune-pellet inesakhono esiphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi
4. Isikere semikhono yokutya okuncinci okufumaneka kwiintlanzi, eqinisekisa ubomi benkonzo ende.
5. Ukubumba okungafaniyo kunokukhethwa ukuba kwenziwe i-pellets eneedayimitha ezahlukeneyo kunye neemilo.
6. iipellets zokugqibela eziveliswa yile ntlanzi yokutya ipellet oomatshini. Ngaba ngu-0.9-15mm.
Umahluko phakathi koDidi oMileyo woDidi kunye neWet Type Pellet Mill
1. Uhlobo olomileyo lweentlanzi zokuloba ngepellet yembewu aludingi mbumbulu, ngoko ke umatshini owomileyo wokutya iintlanzi zepellet zingabizi kwaye kulula ukuzisebenzisa nokuzisebenzisa.
2. Ipellet yokondla eyenziwe ngohlobo lomanzi yentlanzi ipellet umatshini igudile ngakumbi kwaye ikumgangatho olungcono kuba impahla inyibilikisiwe kwaye ixutywe ngokwaneleyo kwindawo yokubhala xa kuthelekiswa nodidi olomileyo lowangaphandle.
3. Umthamo wohlobo owomileyo lohlobo lokutya lwepellet umatshini usezantsi kunohlobo olumanzi lwepellet yokutya, Ngokuqhelekileyo uhlobo lomatshini wokutya owomileyo weentlanzi ungcono noqoqosho kumsebenzisi omncinci nophakathi ophakathi okanye omzi-mveliso.
Isixhobo esiseluhlaza sokwenza ukutya kweNtlanzi
Idatha yezobuGcisa yeFisher feed yePill
imodeli umthamo (h / h) amandla (kw) amandla okondla
( kw) usuku lokukreqaimitha
Ividiyo yeentlanzi zokutya ngepellet